China mpanamboatra bisikileta bisikileta | mpamatsy | Chapman
Bobongolo No. CPM-191009
Famaranana ambonin'ity Poloney # 600
Fitaovana plastika p
Ampahany lanja 300g
Haben'ny bobongolo 650 X 600 X 531mm
Anarana bobongolo Fiarovan-doha amin'ny bisikileta
mpihazakazaka Mpihazakazaka mangatsiaka ho an'ny vavahady Point
Bobongolo fitaovana 1.2343ESR / 1.1730 / 1.2767
Fotoana tsingerin'ny bobongolo: 37 ny
Ny traumata amin'ny bisikileta dia mahazatra ary indrindra ny fahasarotana amin'ny neurologika dia mitarika amin'ny fahasembanana sy ny fahafatesana amin'ny dingana rehetra amin'ny fiainana. Ity famerenana ity dia manangona ny zava-baovao farany momba ny fikarohana eo amin'ny sehatry ny traumata bisikileta ampiarahina amin'ny antony fampiasan-doha amin'ny bisikileta. Ny sehatry ny fikarohana lozam-pifamoivoizana amin'ny bisikileta dia natiora multidisiplinary ary mifandraika tsy ho an'ny dokotera ihany fa ho an'ny manam-pahaizana ihany koa amin'ny fanabeazana, injeniera, fitsarana, fanarenana na asa ara-pahasalamam-bahoaka. Noho io fahamaroan'ny fanontana manerantany sy lohahevitra manokana io, ny famerenana fotoana fohy dia manampy amin'ny famaritana ny torolàlana momba ny fikarohana ary manome vaovao avy amin'ny fitsipi-pifehezana ho an'ny mpikaroka. Azo ambara fa hatramin'izao, na dia be aza ny fikarohana natao tamin'ity faritra ity dia ilaina ny fandalinana bebe kokoa hanombanana sy hanatsarana ny fepetra manokana sy ny filàna amin'ny faritra samihafa, taona, zom-pirenena ary hamoronana programa fisorohana mahomby amin'ny loha mafy sy ratra amin'ny tarehy rehefa mandeha bisikileta.
Sary: Ahoana no hamonjen'ny fiarovan-doha ny ainao: Rehefa mikapoka ny lohanao ianao, ny akorandriaka ivelany mafy (mainty) dia manaparitaka ny fiantraikany amin'ny faritra midadasika. Ny iray manontolo amin'ny liner malefaka (volomboasary) avy eo dia mifoka ny angovo avy eo ka (antenaina) misy fahasimbana kely eo amin'ny lohanao.Raha tsy misy ny fiarovan-doha dia hiompana amin'ny ampahany kely amin'ny lohanao ny fiantraikany iray manontolo, mety hanapotika ny karandohany ary mety hanimba ny ati-dohanao koa.
Amin'ny fahitana voalohany, ny fiarovan-doha amin'ny bisikileta dia mitovy amin'ny satroka hafa, saingy jereo akaiky kokoa dia hahita eritreritra bebe kokoa ianao - ary ny siansa - no namorona ilay endrika. Ny fiarovan-doha mahazatra dia misy ampahany roa lehibe: akorandriaka ivelany mafy sy lamba anaty anaty malefaka. Ny akorandriaka mafy dia natao hanaparitahana ny herin'ny fiatraikany amin'ny faritra midadasika kokoa ka tsy mora vaky ny karandohany, raha toa kosa ny valizy malefaka dia manosika mankao anatiny ary mandray ny angovo misy akony, ka tsy dia ampitaina amin'ny lohanao izany.
Noheverin'ny olona ho tsy milamina ny fiarovan-doha amin'ny bisikileta, saingy niova izany rehetra izany ankehitriny. Tsy hahita mpitaingina bisikileta matihanina mihazakazaka eny an-dalana ianao na amin'ny làlambe raha tsy misy aroloha mifikitra mafy eo an-dohany. Ary ny fiarovan-doha dia tsara lavitra noho ny taloha. Voamarikao ve ny fijerin'ny mpitondra bisikileta olympika amin'ireo satroka chrono miendrika ranomaso ireo? Ny satroka maoderina rehetra dia haingam-pandeha tokoa ary mety hahatonga ny mpitaingin-tsoavalina aza hanapaka kely. Teny fampitandremana iray ihany anefa. Te-ho tsara tarehy ny tsirairay, saingy tadidio fa ny fiarovan-doha amin'ny bisikileta dia ny fiarovana indrindra. Matetika ireo fampidiram-bola be fanina sy be pitsiny dia fanodikodinam-barotra fotsiny — koa aza laniana amin'ny volanao.
Previous: Lasitra momba ny fiara
Manaraka: Sivana menaka ccessories plastika